Ejipta: Tsenabe Iraisam-pirenen’ny Boky ao Caire Andiany faha-40 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Desambra 2018 18:11 GMT
Tiako sy tsy andriko foana ity fotoana iray ity isan-taona. Ankoatra ny fankalazana ny tsingerintaona nahaterahako, io no andro fialantsasatra mangatsiaka indrindra sy tsara indrindra amin'ny tapa-taona manerana ny firenena. Ary eo foana ilay antony manokana mahatonga ahy ho tia ity fotoana ity mihoatra nóho ny hafa – Ny Tsenabe Iraisam-pirenen'ny Boky ao Caire.
Ny 23 Janoary, nanokatra ny Andiany faha-40 tamin'ny Tsenabe iraisam-pirenen'ny Boky ao Caire ny Filoha Mubarak, izay nandraisanà firenena 28 hafa anjara niaraka aminà boky maherin'ny 743 avy amin'ireo trano famoahana gazety Arabo sy vahiny, ho fanampin'ireo hetsika ara-kolontsaina etsy ankilany.
Tsy nanadino naneho ny heviny momba ny hetsika tahaka izao tokoa ireo bilaogera Ejipsiana, na koa momba ireo boky nentin'izany sy ny fitsidihan-dry zareo ilay tsenabe.
Nanoratra tao anatin'ny bilaoginy “Afkar moba’athara” na “Eritreritra Miparitaka”i Bella, mitaraina momba ny halafon'ireo boky sy ny tsy fahampian'ny fandaminana.
Nandray io tsenaben'ny Boky io ho toy ny fetibeko aho. Nanangom-bola aho ary nosoratako tsara foana ny lisitry ny zavatra tiako hananana isan-taona. Rehefa nandeha ny fotoana ary niakatra ny vidiny, somary niova kely ny zava-drehetra. Na izany aza, tsy niova kosa ny fankafizako ny tsenabe, na dia mihakivy hatrany aza aho amin'ny tsy fahampian'ny fandaminana azy io.
Nanoratra momba ny “Fitsidihana ilay tsenaben'ny boky: olompirenena afa-baraka” (rohy maty) i Mokhtar El Azizi, mpandikateny Ejipsiana:
Nankany “Soor El Azbakya” [*] aho, ary toa mitsinjo kokoa ny maha olona sy voarindra kokoa fa tsy toy ny taloha. Efa nasiana talantalana vy, sy fonony plastika, indrisy fa tsy nahavita nanakana tsara ny orana hiantefa any amin'ireo boky ireo fonony ireo. Zara raha mahatadidy taona iray aho tsy nilatsahan'ny orana nandritra ny tsenaben'ny boky, izany no mahatonga ahy mbola mino fa ilaina ny manome toerana manana tafo simenitra ho an'ireo mpivarotra boky ao “El Sayeda Zeinab” sy “Soor el Azbakya”.
Mila ovaina ny gorodon'ny efitrano fampirantiana. Izaho manokana dia efa imbetsaka no voafingana. Fantatra fa tsy ny tsenaben'ny boky ihany no raisin'ny ivotoerana fampirantiana ao amin'ny tanànan'i Nasr, fa fampirantiana maro hafa ihany koa. Marina, tsy lehibe tahaka ny tsenaben'ny boky ireo fampirantiana hafa ireo, kanefa misokatra mandavataona ka noho izany dia miodina tsy an-kiato ireo tranobe ireo.
Nanoratra tanatin'ny “Fitsidihako voalohany ny tsenaben'ny boky tamin'ity taona ity” (rohy maty)i Yehia El Masry, :
Androany, nankany amin'ilay tsenaben'ny boky aho ary io no fotoana voalohany nandehanako tany. Ny tsy fahafenoan'ny vahoaka be loatra angamba no zavatra tsara indrindra momba io tamin'ity taona ity, kanefa aho mahatsapa zavatra tsy milamina tsy mety azoko an-tsaina hatramin'izao. Mety ho voavahan'ny fitsidihako faharoa angamba izany, satria andro voalohan'ilay fampirantiana io ary mbola tsy nipetraka tamin'ny toerany ny ankamaroan'ireo boky anatin'ireo efitrano kely.
Mandritra izay fotoana izay, mazava ho azy fa ny bokin'ireo Bilaogera no lohalaharana anatin'ny lisitry ny tian'ny rehetra hananana amin'ity taona ity, amin'ny ankapobeny. Araka ny nambaran'i Tarek Amr tanatin'ny lahatsoratra navoakany tato amin'ny Global Voices Online, Ejipta: Boky avy amin'ny bilaogy, manamarika ny fivadian'ny bilaogy telo goavana fara-fahakeliny ho boky amin'ity taona ity, ho an'i Rehab Bassam, Ghada Mahmoud ary i Ghada Abd El A’al ankoatra ireo bilaogera hafa mankalaza ny fivoahan'ny bokiny.
Nividy boky roa vaovao ny bilaogera sady mpanao gazety, Yasser Thabet: ny “Gomhoreyet el fawda” na “Repoblikan'ny korontana“ ary ny “Kabl el tofan” na “Alohan'ny tondradrano” izay mitovy amin'ny lohatenin'ny bilaoginy navoaka tamin'ity taona ity, izay nanoratany izao fanehoankevitra izao:
Eo am-pototr'izao rehetra izao no mijoro ny bilaogera.
Angamba, mitady ny marina na te hikitika ny lanitra amin'ireo taova fahatsapany, hanaingoany ny akanjony miaraka aminà kintana iray na roa, na koa maniry ny hanafaka ny fanahy na ny tanindrazana.
Nanoratra tanatin'ny “Mn nefsy” i Mohamed Ebeeh momba ireo boky efatra hafa azy sy an'ireo mpiara-miasa aminy anatinà gazetiboky Ejipsiana hita anaty aterineto, “Bos w Tol”.
“Doaa Samir” , “Hob b lon el Banafzeg”, Ny fitiavana amin'ny lisy.
“Ahmad Amar”, “Hanen”, Embona.
“Hossam mostafa”, “Yawmyat Modares fl aryaf”, Tantaranà mpampianatra iray any ambanivohitra.
Ary ho an'i “Mohamed Ebeeh”, “Azizi.. 999”, 999.. Malala.
Raha ny tenako kosa, ary ivelan'ireo taraina rehetra etsy ambony; mieritreritra ny ho any aho rahampitso maraina, ary ao amin'ny lisitry ny zavatra tiako hananana, boky vitsivitsy momba ny literatiora Arabo maoderina, ireo tantaram-piainana sy ireo mpanoratra momba ny politika, ankoatra ireo tantara an-tsoratra Anglisy amin'izao fotoana: Mohamed el Maghzangi, Abd El Wahab El Mesery, Amin Ma’aloof, Bahaa taher, Edward Saeed, Gabriel Garcia Marquez, Sydney Sheldon ary indrindra indrindra ny “Masoandro Arivo Kanto” nosoratan'i Khaled Hosseini ary koa ny bokin'ireo bilaogera Ejipsiana.
[*] Soor El Azbakya: toerana iray hamarotana ireo boky amin'ny vidiny tena mora. Matetika, any ireo mpianatra no mividy ny bokiny. Mandritra ny tsenaben'ny boky, afindra miala ny toerany mahazatra ao El Ataba ny “Soor El Azbakya” ary alefa any amin'ny Madinet Nasr mba ho mora kokoa ho an'ny olona ny mividy ireo boky, na tonta na vaovao.